Iràna: Dr. Hesam Firouzi, Bilaogera Iray Hafa Naiditra Am-ponja · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Oktobra 2017 6:10 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Nederlands, Italiano, বাংলা, English
Ilay bilaogera sady mpitsabo, Dr. Hesam Firouzi, no nahazo tsilian-tsofina tsy ela akory izay, tamin'ny alàlan'ny mpisolovava azy, momba ny fahafatesan'ilay bilaogera, Omid Reza Mir Sayafi tany am-ponjan'i Evin tao Teheràna. Nilaza izy fa nanaitra ireo manampahefana miandraikitra ny fonja mba hoalefa hamonjy hopitaly ilay gadra miady amin'ny fahafatesana, saingy nolavin-dry zareo.
Araka ny nambaran'ny Human Rights Watch, mpitsabo mendri-pitokisana tokoa nandritra ny fotoana ela raha i Hesam Firouzi ho an'ireo gadra politika, isan'ireny i Ahmad Batebi, Akbar Gangi, Ayatollah Burujirdi, AbolFazl Jahandar, itompokolahy Akbar Mohammadi, sy ny maro hafa.
Ny helony, araka ny voalazan'ny Rantsana faha-6 amin'ny Fitsaràna Revolisionera ao Iràna, dia misy ny hetsika manohintohina ny filaminan'ny firenena, ny fihantsiana ny fanehoankevitry ny vahoaka, ny fanelezana vaovao tsy marina, fanomezana fialofana sy fikarakarana ara-pitsaboana ho an'ireo gadra politika.
Sazy 15 volana no efain'i Firouzi. Fotoana fohy nialoha ny nampidirana azy tany am-ponja no nanoratany [fa] farany tao amin'ny bilaoginy. Nosoratany fa maniry fahalalahana ho an'i Iràna izy ary navoakany tao ny sarin'ny zanany vavy.
Ava, 7 taona,; zanaka vavin'ny Dr. Hesam Fioruzi, nanoratra [fa] ity tononkalo manaraka ity nataony ho an'ireo olona nampiditra am-ponja ny rainy.
“Ny tena tontolo no irianay.
Tsy ity no tena tontolonay
satria feno fifandonana ao anatiny.
Amin'ny 5 maraina izao,
atsaharo ny fampijaliana.
Ho an'ireo mpaka am-bavany ny raiko ity tononkalo ity satria tsy tiako indray hisambotra azy izy ireo.”
Behzad Mehrani, bilaogera sady mpikatroka mpiaro zon'olombelona, namoaka taratasy iray ho an'i Ava tao amin'ny bilaoginy manokana [fa]:
Angamba any an-tsekoly dia ampianarin-dry zareo anao ny hoe toerana natao ho an'ireo olona nahavita hadisoana ny fonja. Tsy nandainga taminao ry zareo, saingy tsy nohazavain-dry zareo koa anefa ny marina. Gadra ny rainao satria lehilahy mendri-pideràna.
Nisy fanangonantsonia iray natomboka [An] ho fanohanana an'i Dr. Firouzi. Marobe ireo bilaogera, mpikatroka mpiaro zon'olombelona, ary fikambanana mpianatra no efa nanasonia.
Efa talohan'ny 2007, nofonjaina efa ho telo herinandro i Firouzi, fony izy nampangaina ho nanafina gadra politika nandositra sy nanao antsafa ho an'ireo mpampahalala vaovao avy any ivelany.
Taorian'ny famotsorana azy dia nozarainy tao amin'ny bilaoginy, tanaty taratasy iray misokatra nalefany ho an'ireo manampahefana ao amin'ny governemanta ny zavatra niainany tany am-ponja. Nosoratany fa indray mandeha izy no efa naiditra tao anatin'ny efitrano kely mirefy 15 hatramin'ny 20 metatra toradroa izy, niaraka tamin'ireo mpifonja hafa 19 hatramin'ny 20. Nambarany fa any amin'ireo faritra sasany ao am-ponja, azo vidiana an-kalalahana ny zava-mahadomelina, indrindra fa ny ‘crack’.